Home Wararka Xog Deg Deg ah : Shaqsiyaadka lagu Eedeeyay Afgambiga Dhicisoobay
Xog Deg Deg ah : Shaqsiyaadka lagu Eedeeyay Afgambiga Dhicisoobay
MOL oo mar waliba isku dayda inay baaritaan xaqiiqi ah ku sameyso dhacdooyinka wax u dhimaya dalkeenna ayaa waxay heshay xog la xiriirta siyaasiyiin iyo shaqsiyaad qaybka muhiim ka ahaa Afgambigii dhicisoobay ee maanta uu isku dayey Madaxweynihii uu xilka ka dhammaaday laakiin raba inuu xoog ku sii haysto dalka Maxamed Cabdullahi Farmajo.
Waxaa la soo warinayaa in xubno aad ugu dhow Farmaajo ay wax ka ogaayeen, qeybana ka ahaayeen qaban qaabada afgambiga dhisicoobay, iyagoo qaarkood ay si toos ah ugu lug lahaayeen afgambiga dhicisoobay. Waxaa socda baaritaanno lagu dabgalayo shaqsiyaadkaas si loogu soo oogo dacwooyin sababi kara in xukun adag oo ay mudan yihiin la marsiiyo, iyadoo mar waliba loo caddaalad falayo si loogu xukumo haddii ay ku cadaato eedaymaha loo soo jeediyay.
Xubnaha baaritaanka lagu hayo oo isugu jira xildhibaano, wasiirro iyo masuuliyiin kale waxaa liis hordhac ah oo ay MOL heshay ka mid ah:
Xil Cabdirahman Kulmiy Xirsi
Xil Cabdishakur Cali Mire
Amb Cali Fiqi
Wasiir Aden Cisman Xuseen (Qoryooley)
Wasiir Balal Cisman
Was. Cabdisiciid Muuse Cali
Wasiir Jamaal Maxamed Xasan.
Iyadoo saacidihii la soo dhaafay Wasiirrada Jamal iyo Cabsiciid ay qeybinyeen laaluush ay ku beer laxowsanayaa beesha Caalamka kuwooda la shaqeysta. Lacagtaas waa canshuurtii laga ururiyey dadka Muqdisho.
Xalay gelinkii danbe ayuu qoraal soo saaray Madaxwaynaha hore Farmaajo oo ku raxeysanaya villada dhexdeeda qoraalkaa oo uu ku sheegay in uu shaqada ka jiijinayo RW Jamhuuriyadda Maxamed Xuseen Rooble.
Sidoo kalena saaka ayuu Farmajo ciidamo taabacsan ku amray in ay la wareegaan xafiiska RW, isagoo waxyar kadibna ay u diaarsaneyd inuu ku dhawaaqo in dalka uu ka dhacay afgambi aan dhiig ku daadan, taladana lagu soo celn doono gacanta shacbiga marka ay u bislaadaan inay doorasho geli karaan.
Waxaasa mahad weyn mudan Ilaalada Raisalwasaaraha iyo qaar ka mid ah ilaalada Madaxtooyada oo ka hor yimid sharcidarrada iyo khatarta uu dalku geli lahaa haddii sidaas loo fuilin lahaa amaradaas sharci darada ee Farmajo.
Maadaama ay soo dhowaatay xelligii la sixi lahaa khaldaadkii ay dowladdaan dalka gelisay waxaan shacbiga ku boorrineynaa inay fiiro dheer u yeeshaan shkhsiyaadka kor ku xusan, kuwaas ku eedeysan inay dembiyo culus ka galeen shacbiga Muqdisho Ivo Guud ahaan dalka oo dhan.
Sidoo kale hay’adaha oo beryahan si fiican u shaqeynayey waxaan ugu baaqeynaa inaysan shakhsiyaadka dembiyada loo hays aysan dalka ka baxsan.
Previous article[Deg Deg] Ciidamo ka amar qaata Wasiirka Amniga oo la wareegay xarunta NISA & Gobolka Banaadir
Next articleMareykanka oo si buuxda u taageeray Rooble, soona saaray hanjabaad culus
Shirka Golaha Wasiirada Jubaland ayaa looga hadlay khilaafka DF & Maamul...
Maxeey tahay sababta Website-ka Wasaaradda Arrimaha Dibada Ethiopia Hawada looga saaray